Swarnim (सानो प्रयास ): अतितलाई फर्किएर हेर्दा !!!!
अतितलाई फर्किएर हेर्दा !!!!
अझै पनि यो स्मोक अलार्म को आवाज सुन्दा झस्किएर आउछु अनी सम्झन्छु त्यही रात, अब त बिर्सनु पर्ने हो7बर्षबितिसक्यो, तर मान्छे को जात न हो राम्रो चाडै नै बिर्सन्छ नराम्रो बिर्सन जुग लाग्छ। घरमा म एक्लो थिए म सँग बस्ने दिदिहरु छुट्टी मनाउन आफन्तहरुकोमा जानु भएको थियो। एक्लो बस्नुको पिडा जस्ले भोगेको छ उस्लाई मात्र थाहा हुन्छ, जहाँ रमाइलो पनि हुन्छ अनी पिडा पनि हुन्छ। शायद मलाई पिडा मात्र थियो होला।
गर्मी महिना चाडै खाना खाइ झ्याल ढोका सबै लगएर सुतिसकेको थिए । नेपाल हुँदा गर्मी महिनाको कुन दिन चाडै सुतियो होला र ? खाना खाए पछी बल्ल दिन सुरु हुन्थियो, खेल्न निस्कने, बाबु आमलाई छलेर खोलामा पौडी खेल्न जाने यस्तै अनगिन्ती कुरा गरिन्थियो जुन बाबु आमालाई मन पर्दैन थियो। तर म आफ्नो देशमा थिएन र यो देशले मलाई आफ्नो बनाउन सकेको थिएन भनौ या मैले यो देशलाई आफ्नो बनाउन सकेको थिएन।
रातिको २ बजे तिर एक्कासी अनौठो आवाजले झस्कायो, उठेर यता उती हेर्दा स्मोक अलार्म बजेको रहेछ घरमा कतै पनि आगो लागेको छैन । सबै घर हेरिसके पछी, झन डर लाग्न थाल्यो कतै धेरै गर्मी को कारणले केही भएको त होइन? हिजो बेलुका खाना बनाउदा म बाट केही गल्ती भयो कि ? अनेक प्रश्न उठे मनमा तर कुनै पनि प्रश्नको हल गर्न म सक्छेम भएन। मैले एक मात्र के सिकेको थिए भने, त्यसरी बज्न थालयो भने कुनै कपडाले अलार्मको वारी पारी हम्कनु अनी बन्द हुन्छ, हम्कन थालेको आधा घण्टा भएसक्यो बन्द हुनेको नाम लिदैन। झन पछी झन डर बड्न थालिसकेको थियो, त्यो आवाज बन्द गर्ने कुनै उपाय थिएन म सँग, राती को २ बजे कस्लाई फोन गर्नु, शायद फोन गर्नलाई पनि मनले खाएको आफ्नो थिएन होला, अनी अन्तिममा केही सिप नलागी ९११ फोन गर्न वाध्य भय ।
फोन महिलाले उठाउनुभएको थियो, उहाको स्वर सुनेपछी केही राहत आयो, सोचे कसैले मलाई सहयोग गर्छ। एकैछिनको कुराकानीमै पुलिस र दम्कलको गाडी आयो, पुलिसले घर छानबिन गरे पछी भने तिम्रो अलार्मको ब्याट्री सकिएको रहेछ भोली फेर्नु। अनी बल्ल मन झसँग भयो अनी मनमनै भने मेरो बुद्धी? शायद पुलिसहरु आउँदा सम्म पनि मेरो जिउ डरले कामिरहेको थियो, तेसैले अनेक प्रश्नगर्दा एउटा प्रश्न यो पनि थियो कि म कुनै लागु औषधी सेवन गर्छु गर्दैन, डराएर उत्तर दिएको थिए लिदैन। केही बेरमै घरमा म एक्लो भए, अनी तेही डरले रात बित्यो।
त्यो रात कसरी बित्यो बित्यो, अर्को दिन बिहानै सरु दिदिलाई फोन गरे अनी रातिको कथा सुनाए, कथा सुनाउदा झन आफुलाई अचम्म लागेर आयो, कसरी मैले त्यती सानो कुरामा डराएर रात बिताए। आमा भन्नुहुन्थियो मेरी कान्छी छोरी त निडर छ, बुदिमानी छ। त्यो दिनको घटना पछी निडर भन्ने नै बिर्सिय। छोरी एक्लै बिदेश नजाउ, बिहे गरेर जाउ, साथी भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर आमाले धेरै नै कर गर्नु भएको थियो । तर आमाको एक नसुनी, एक्लै आएकी थिए म पर्देश जहाँ आफ्नो कोही थिएन , सबै अन्जानलाई आफ्नो बनाउनु थियो, घोरिएर सोच्दा, म नै थिए हाम्रो सन्तान मा बिदेशिने पहिलो, आमालाई डर पनि किन नलागोस त सात समुन्द्र पारी छोरी पठाउदा। म धेरै नै smart छु भन्ने घमन्ड थियो, दाङमा के जिल्ला प्रथम भएको थिए मेरो घमन्ड अली धेरै नै बढेको थियो, तर किताबि किरो कहिले पनि काम लाग्दैन भन्ने बुझियो। मामा भन्ने गर्नु हुन्थियो common sense isasense in the absence of whichaperson is nonsense शायद तेही भयो होला, या मैले २ बर्ष सम्म पनि यहाँको तौर् तरिका सिक्न पछी परे होला।
८ बर्ष हुन आट्यो परदेशीएको, जिन्दगीमा मान्छेलाई कहिले पुग्छ र? तर मनको आनन्द छ अहिले । जब अत्तितलाई पछाडि फर्किएर हेर्छु मनमा अझै कता कता डर पलाएर आउछ अनी सोच्छु बाचेकै हो हामी सकेकै हो हामीले। जब पटक पटक अनेक घटना घट्दै जान्छन, तब टाढा भएका बाबु आमा,आफन्त, प्रेमी, प्रेमिका, सबै फिक्का हुँदै जान्छ । जती सुकै नारी शक्ती, नारी आवाज भने पनि, देश बिदेश घुमे पनि, साथ चाहिन्छ हामीलाई। पिर मेटाउन साथ चाहिन्छ, दु:ख बिसाउन साथ चाहिन्छ, प्रेमी बिर्सन साथ चाहिन्छ, सुखको कुरा गर्न साथ चाहिन्छ । कसैले जब साथ दिने पहल मात्र गर्छ हामी त्यो साथलाई कहिले जान दिनैन भनी अङ्गाल्न थाल्छौ, त्यती बेला न त जात, रङ, रुप, पढाई आउछ, न धन आउछ। मात्र आउछ त साथ, माया, नजिक हुनुको आबास, आफु सुरक्षित हुनुको ढाडस । अनी आउछ त्यो साथी जस्लाई रातिको २ बजे पनि फोन गरेर घरमा त्यो आवाज बन्द गर्न सहयोग माग्न सकु।
प्रेम निस्वार्थ हुन्छ भन्छन तर किन र कसरी थाहा छैन। मलाई लाग्छ मैले निस्वार्थ प्रेम गरेको छैन, मलाई साथ चहिएको थियो, मलाई सम्हाल्ने कोही चहिएको थियो त्यसैले प्रेम भयो, बिहे भयो । निस्वार्थ माया त म Shahid Kapoor लाई गर्छु किनकी मलाई केही पाउने आस छैन, भोली गएर Shahid Kapoor को ठाउँ अरु कसैले लिन सक्छ जस्तै Ranbeer Singh. मलाई पाउने आस छ मेरो माया बाट, जुन हो साथ, compromise, mutual understanding, परिवारको माया, जुन मैले पाएको छु। त्यसैले त म मायामा छु अनी दिनहु माया बढेर जादैछ।
धेरै बर्ष पछी फेरी हिजो राती त्यही स्मोक अलार्मको आवाज सुनियो तर यो पल्ट कोही थियो म सँग, कोही थियो बिगतको कथा सुन्न, अनी म झस्किएर उठ्दा ढाडस दिन।
Posted by smita sharma at 10:27 AM
मर्नु परे मरे मर्छु